निर्वाचनका लागि झोला छाप्ने जिम्मा औषधि बेच्ने कम्पनीलाई – Health Post Nepal
निर्वाचनका लागि झोला छाप्ने जिम्मा औषधि बेच्ने कम्पनीलाई
२०७८ चैत १० गते २२:२५
काठमाडाैं – स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ‘असम्बन्धित’ कम्पनीलाई झोला छाप्न ठेक्का दिएको छ।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि करिब ५० हजार झोला छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेका थियो। त्यसका लागि आयोगमा १० वटा कम्पनीले टेन्डर भरेका थिए। तर, आयोगले भने सबैभन्दा कम मूल्य करिब ४ कराेड ४५ लाख २२ हजार रूपैयाँमा ती झोला छाप्नका लागि जि. एच. मेडिहेल्थ कम्पनीलाई जिम्मा दिनेगरी सिफारिस गरेको हो।
आयोगले एउटा झोला छपाइको अधिकतम मूल्य करिब २ हजार रूपैयाँ राखेको थियो। तर ‘लो बिडिङ’मा जाँदा उक्त कम्पनीले झोला छाप्ने ठेक्का पाएको हो। यो खासगरी मेडिकल सामग्रीहरू बिक्री गर्ने कम्पनी हो। कम्पनीले २ हजारबाट घटेर कम्तीमा ८९० रूपैयाँ ४४ पैसामा एउटा झोलाको मुल्य तोकेर टेन्डर पाएको हो।
तर आयोगका अनुसार यो निर्णय अझै भइसकेको छैन। प्रारम्भिक चरणमा टेन्डर भरेका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ अझै अन्तिम निर्णय भइनसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार यो टेन्डर पास गर्नका लागि एउटा उपसमितिको सिफारिसमा एकजना सहसचिवले प्रमुख आयुक्तसमक्ष रिपोर्ट पेश गर्छ र त्यसैका आधारमा प्रमुख आयुक्तले अन्तिम निर्णय गर्छन्।
सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने जिएच मेडिहेल्थ लगायत अरू चारवटा कम्पनीको सिफारिस गरेको छ।
‘हामीले सार्वजनिक खरिद एनअनुसार नै कम्पनीहरू छनोट गर्ने हो। यस्तोमा सबैभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नेहरूलाई छान्नुपर्ने हुन्छ’ यो ठेक्का छनोटका लागि खटिएका आयोगका एकजना अधिकृतले भने ‘तर हामी गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौं। गुणस्तर विभागले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई स्विकार गर्ने हो।’
उनका अनुसार त्यो कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा मात्रै परेको र अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
तर टेन्डरका लागि ठेक्का दिएका अरू व्यवसायीले भने छपाई सम्बन्धि कुनै अनुभव नै नभएको र फरक कारोबार गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने ‘खेल’ भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।
‘हामी त स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा जान चाहन्छौं। वर्षौंदेखि त्यही काम गरिआएको अनुभव हुँदाहुँदै पनि हामीलाई पाखा लगाइएको छ’ टेन्डर भरेका एकजना व्यवसायीले भने ‘त्यस्तो कामको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई कसरी छनोटमा पारियो। जब कि त्यति सस्तोमा गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ।’
झोला छाप्ने छनोटमा परेको जिएच हेल्थहोम कम्पनीले भने आफ्नो कम्पनीलाई त्यस्तो काम गर्ने अनुमति पनि भएको बताएको छ।
कम्पनीका सञ्चालक मुकुन्द गौतमले भने- ‘हामीले गार्मेन्ट उद्योग पनि चलाइरहेका छौं। त्यसैअनुसार हामीले पनि प्रतिष्पर्धा गरेका हौं। हामीले सकेसम्म कम मूल्यमै गुणस्तर दिन्छौं।’